Any amin'ny faritra ara-toekarena manokana any Shenzhen, Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD dia orinasa feno miasa manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary marketing amin'ny Dental Zirconia Ceramic Block.
Yucera nify ST zirconia sakana ho an'ny cad / cam ...
Z Clearonia Zirconia Disc 98mm Multi-layer Zirc ...
HT zirconia mpanamboatra fitaovana nify cos ...
Mifandraisa aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra
Azoko antoka fa ny orinasan-tsika dia ampy tsara ho an'ny programa ataonao eo amin'ny tsenanao.
Nanangana fiaraha-miasa amin'ny ivon-toeram-panodinana nify lehibe sy hopitaly am-bava i Yucera, nahazo fahombiazana teo amin'ny sehatra ary nahazo teknisiana sy marary marobe.
YUCERA dia manana ekipa teknika matihanina matanjaka, 60% ny mpikambana ao aminy dia manam-pahaizana biolojika zokiny matihanina ary manam-pahaizana manokana momba ny CNC.
Amin'ny maha mpamatsy fitaovana am-bava matihanina antsika dia afaka manome fitaovana nify nomerika, fitaovana nify ary vokatra sy serivisy nomerika feno izahay.
Diany vaovao fampidirana indostrialy, shakin ...